Sida loo kordhiyo difaaca: xoojinta habka difaaca jirka | Ragga Stylish
Sida loo kordhiyo difaaca
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo kordhiyo difaaca? Haddii aad dareento ciirsi la'aan wajiga fayrasyada kugu wareegaya, waxaad u badan tahay inaad u baahan tahay inaad siiso nidaamkaaga difaaca.
In kasta oo fiiro gaar ah la siiyo inta lagu jiro xilliga qaboobaha (xilliga qabow iyo ifilada), Hubi in nidaamka difaaca jirka uu ku shaqeynayo awood buuxda sanadka oo dhan in lagula dagaallamo dhammaan noocyada infekshannada iyadoo la damaanad qaadayo. Tilmaamaha soo socda ayaa kaa caawin doona inaad halkaas gaarto.
1 Waa maxay difaaca?
2 Caadooyinka furaha u ah difaac fiican
2.1 Sida loogu kordhiyo difaaca cuntada
3.1 Cayaaraha waxaa ka buuxa faa iidooyin
3.2 Ka ilaali walaaca
3.2.1 Hel saacado kugu filan
Waa maxay difaaca?
Sida magaceeda ka muuqata, difaacyada ayaa jirkaaga ka difaaca malaayiin hanjabaad ah oo ku soo duuli kara oo qatar weyn gelin kara. Nidaamka difaaca jirka waa caqabad dabiici ah, oo ah wax soo saar isbeddel ah taas oo fulisa hawl sida ugu fudud ee ay muhiimka u tahay: in naloo noolaado oo aan caafimaad qabno.
Shabakadan isku dhafan waxay kaa ilaalinaysaa fayrasyada, bakteeriyada, dulin iyo fangaska kaa dhigi kara jirro. Hanjabaadahaan waxaa laga helayaa meel kasta, laga bilaabo shaqada iyo wadada ilaa gurigaaga. Sidaa awgeed, difaacaagu waa inuu ahaadaa mid wanaagsan oo looga hortagayo inay galaan jirkaaga. Shilal badan ayaa ka horyimid caqabadan, laakiin kuwa kale oo badan ayaa maareeya inay galaan. Nasiib wanaagse, habka difaaca jirka ayaa sidoo kale loo diyaariyey inuu kaa difaaco gudaha, weeraro iyo burburinta kuwan soo duulay ka hor inta aysan tarmin, iyo xitaa inta ay sameynayaan.
Marka ay timaado nidaamka difaaca jirka, waxaad badanaa ka fikirtaa hargab iyo ifilo, laakiin difaac fiican ayaa kaa difaacaya cudurada yar yar iyo kuwa daran, oo ay ku jiraan kansarku.
Caadooyinka furaha u ah difaac fiican
Ma ogtahay in qaab nololeedkaagu kaa caawin karo difaacaagu inuu si fiican u shaqeeyo? Cunto xumo, qaab nololeedka fadhiidka ah, hurdo la’aanta, iyo walbahaarka daba dheeraada ayaa kamid ah waxyaabaha wiiqaya caqabadan dabiiciga ah, taasoo kaa dhigeysa inaad u nuglaato bakteeriyada, fayrasyada iyo sunta.
Dhanka kale, nafaqada nafaqada leh ma bixiso wax damaanad ah markay tahay xoojinta difaaca. Khamaarka aaminka ahi waa inaad ugu noolaato nolol caafimaad leh sida ugu macquulsan. Kuwa soo socdaa waa caadooyinka muhiimka ah:
Sida loogu kordhiyo difaaca cuntada
Sida la filayo, cunnadu aad ayey muhiim ugu tahay xoojinta nidaamka difaaca jirka. Dareenkan, waxaad u baahan tahay inaad cunto khudrad ku filan, khudaarta, iyo miraha isku dhan.
Nafaqooyinka ku jira cuntada - gaar ahaan fitamiinada antioxidant-ka waxay ka caawiyaan difaacyada inay ku shaqeeyaan awood buuxda. Istaraatiijiyadda ugu fudud ee lagu heli karo nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah habka difaaca jirka iyo howlaha kale ee muhiimka ahba waa nus ka mid ah saxankaaga ka buuxi khudradda tan kalena borotiinka caatada ah iyo kaarbohaydraytyada. Hubso in gaadhigaaga wax iibsiga uu ku yaallo midabbo kaladuwan, miro iyo khudaar, si aad u hesho tirada ugu badan ee antioxidants ee suurtogalka ah. Waa in la ogaadaa in toonta sidoo kale loo tiriyaa astaamaha antibiyootikada, markaa ka fiirso inaad ugu isticmaasho cuntadaada.
Khamriga iyo sokorta laguma talinayo, gaar ahaan haddii difaacaagu hooseeyo. Sidaa awgeed, u isticmaal dhexdhexaad dhexdhexaad ah cabbitaannada aalkolada leh (laba cabitaan maalintii ayaa ugu badan) iyo cunnooyinka sonkorta leh. Dabiici ahaan, tubaakada Waa caado kale oo aan caawineynin habka difaaca jirka, sidaa darteed haddii aad sigaar cabto, xaaladdaada difaaca ayaa ka mid ah sababaha badan ee aad u joojiso.
Haddii aadan jimicsi joogto ah sameynin, bilowga ayaa isbeddel weyn sameyn kara. Tababar saddex maalmood ama ka badan usbuucii oo hubi in muddada jimicsigaagu yahay 30 daqiiqo ama ka badan.
Sameynta waxqabadyada kordhiya garaaca wadnaha ayaa lala xiriiriyay xoojinta nidaamka difaaca jirka. Sida muuqata, unugyada dhiiga cad ee ciyaartooyda ayaa sifiican uga shaqeeya kuwa kuwa aan ku darin wax nooc jimicsi ah nolol maalmeedkooda.
Cayaaraha waxaa ka buuxa faa iidooyin
Fiiri maqaalka: Faa'iidooyinka cayaaraha. Halkaas waxaad ka heli doontaa dhammaan faa'iidooyinka jirkaaga ee ah inaad sameyso nooc kasta oo isboorti ah oo joogto ah.
Ka ilaali walaaca
Ma ogtahay in walwalka daba dheeraada uu daciifin karo difaacaaga oo kaa dhigi karo mid aan lagaa difaacin cuduro badan. Haddii aad dareento in heerarka culeyska fekerkaagu ay aad u sarreeyaan maalinba maalinta ka dambaysa, waxaa jira caadooyin qaarkood oo kaa caawin kara yareynta dhibaatada. Waxa ugu horreeya waa in la isku dayo in nolosha si deggan loo qaato. Si kastaba ha noqotee, taasi way fududahay in la dhaho laakiin ma fududa in la fuliyo, markaa kuwa soo socdaa waa xeelado dheeri ah oo la taaban karo si loo yareeyo buuqaaga
Hel saacado kugu filan
Mid ka mid ah furayaasha ka hortagga culeyska fekerka iyo kordhinta difaaca waa hurdo. Marka qofku uusan si fiican u seexan, shaqooyin badan ayaa saameyn xun ku yeelan kara, oo ay ku jiraan habka difaaca jirka. Haddii aad u maleynaysid inaad horeyba ugu raaxeysatid tayo wanaagsan oo hurdo ah, iskuday inaad ku yareyso walaacaaga xeeladaha soo socda:
Adeegso farsamooyinka nasashada
Sare u qaad tayada iyo muddada waqtiga firaaqadaada
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Sida loo kordhiyo difaaca
Sida loogu labisto wadaag wadaag